Fivavahana amin' ny razana - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Fivavahana amin'ny razana)
Fanatitra ho an'ny razana tanterahin'ny olona any Sina
Ny fivavahana amin' ny razana dia fivavahana amin' ny fanahin' ny maty, izay heverina fa afaka mitahy sy miaro ny olona mbola velona izay ankasitrahany, na manasazy izay olona tsy ankasitrahany. Fanao iraisan' ny fivavahana tsy iantsoana mivantana andriamanitra (na an' Andriamanitra) ny fivavahana amin' ny razana. Nivavahana ny fanahin' ny maty tany Ejipta sy tany Rôma. Mbola hita izany fanao izany eto Madagasikara, any Sina, any Vietnamy, any Kôrea Atsimo ary any Meksika. fa nampiditra ny fivavahana amin' ny razana hatramin' ny fiforonany ny fivavahana tatsinanana. Na ao Eorôpa koa dia ahitana io fanao io amin' ny fampifangaroana azy amin' ny fivavahana kristiana. Ao Afrika sy any Amerika Avaratra koa dia ahitana ny fivavahana amin' ny razana. Manam-pifandraisana hentitra amin' ny fahafantarana ny tetiaran' ny taranaka tany aloha ny fivavahana amin' ny razana.
1 Ny fivavahana amin' ny razana tany Kanaana
2 Ny fivavahana amin' ny razana ao Sina
3 Ny fivavahana amin' ny razan' ny Aostrôneziana
3.1 Any Indônezia
3.2 Eto Madagasikara
Ny fivavahana amin' ny razana tany Kanaana[hanova | hanova ny fango]
Mino ny Kanaanita fa aorian' ny fahafatesan' ny vatana dia miala ny fanahy (npš na npsh) ka mankany amin' ny tanin' ny andriamanitra Mot ("Rafahafatesana"). Alevina miaraka amin' ny fananana natokana ho an' izany ny vatana sady anaovana fanatitra sakafo sy zava-pisotro mba tsy hanelingelina ny fiainan' ny velona. Ivavahan' ny havany mbola velona ny fanahin' ireo maty ka matetika angatahany fanampiana. Mivavaka amin' ny fanahin' ny havany maty ny isam-pianakaviana izay mihevitra azy ireo ho andriamanitry ny isan-tokantrano.
Ny fivavahana amin' ny razana ao Sina[hanova | hanova ny fango]
Hatramin' ny andro ela tany aloha dia nitana ny anjara toerany lehibe teo amin' ny fisainana sy fivavahan' ny Sinoa ny fivavahana amin' ny razana. Izany fivavahana izany dia matetika mifangaro amin' ireo fivavahana sy fisainana taôista, bodista, silamo, kristiana na marksista. Noho ny fifanakaikezany amin' ny fisainana kônfosiana izay manindry ny fitiavan' ny zanaka manompo ny ray, dia azo lazaina fa fanao efa hatry ny ela ny fivavahana amin' ny razana ao Sina. Inoan' ny mpanaraka azy ho mampifandray ny velona sy ny maty (razana) iIzany fivavahana izany. Noho izany dia anaovana fanatitra sakafo ny maty amin' ny fotoan' ny firavoravoana (sahala amin' ny fetin' ny maty) izay mety ho ny fitsingerenan' ny andron' ilay maty na ny an' ny razamben' ny fianakaviana (fanao matetika izany amin' ny fianakavian' ny saranga ambony).
Ny latabatra kely natokana ho an' ny maty dia matetika apetraka ao amin' ny efitrano natokana ho amin' izany ao an-trano, fa ny tempolin' ny razana kosa dia ao amin' ny tapany atsimo-atsinanan' ny tokontany. Fanao ny mandoro emboka manitra sy vola taratasy. Fanao koa ny mamangy ny fasan-drazana mba hanadiovana azy amin' ny fotoan' ny atao hoe Qingmingjie ("fahadiovan' ny rivotra") (ampahefatra amby roapolon' ny taona sinoa izay mifanandrify amin' ny herinandro roa voalohany ao amin' ny volana Avrily).
Araka ny lovantsofina dia ny mpanjaka irery ihany no afaka manao sorona ho an' ireo razany hatramin' ny taranaka fahafito, ny andriandahy hatramin' ny taranaka fahadimy, ny manamboninahitra ambony hatramin' ny taranaka fahatelo, ary ny olon-tsotra hatramin' ny razany iray ihany. Ny emperora kosa, izay miantso ny Zanaky ny Lanitra, dia manao sorona amin' ny Lanitra sy amin' ny Tany, izay atao hoe "rainy sy reniny".
Ny fivavahana amin' ny razan' ny Aostrôneziana[hanova | hanova ny fango]
Hita ao amin' ny mponina miteny aostrôneziana toa an' ireo nosy ao Ôseania sy i Madagasikara ny fivavahana amin' ny razana. Izany no mampisy firesahana ny amin' ny fanaovana andriamanitra ny razana ao amin' ny literatiora pôlineziana, izay tsy maintsy ivavahana. Ireo atao hoe Moay (sariolona goavambe vita amin' ny vato) ao amin' ny Nosin' ny Paska dia heverin' ny arkeôlôga ho sarin' ireo razana tonga zanahary.
Any Indônezia[hanova | hanova ny fango]
Any Indônezia dia nahitana ny fivavahana amin' ny razana teo amin' ny mponina sasany. Ny atao hoe Podom (vato nosokirina anaovana vata miendrika lakana na trano hametrahana ny maty) ao amin' ny vahoaka Batàka Tôba (Batak Toba) any amin' ny nosy Somatra, ny Varoga (Waruga) ao amin' ny foko Minahasàna ao Solaoesy avaratra ary ny vatam-paty ao amin' ny foko Karo ao Somatra avaratra dia ohatra vitsy amin' ny endrika isehoan' ny fivavahana amin' ny razana.
Eto Madagasikara[hanova | hanova ny fango]
Fandihizana atao amin' ny famadihana
Ny fivavahana amin' ny razana dia fanao be mpanaraka eto Madagasikara ka hita amin' ny fomba fanaovana fasana izany any afovoan-tany, izay manatanteraka ny famadihana, izay amoahana ny taolan' ny havana maty avy ao am-pasana mba hamonosan-damba azy sy hampidirana azy am-pasana indray. Izany fanao izany dia ataon' ny Malagasy mbola mandala ny fivavahan-drazana, ka mitazona sy mampitombo ny fifandraisan' ny velona sy ny razana. Ahatsiarovana ireo razana sy ivorian' ny fianakaviana sy ny mpiara-monina ny famadihana ary anaovana lanonana. Ny mponina ao amin' ireo tanàna manodidina dia asaina koa mba hanatrika ny lanonana izay izaràna sakafo sy toaka sady ihainoana hiragasy na hira sy mozika hafa.
Aseho amin' ny alalan' ny fanajana ny fady koa ny fivavahana amin' ny razana izay hajaina mandritra na aorian' ny andro nahavelomany. Inoana fa ny fanehoam-panajana ny razana amin' ny alalan' ny fanajana ny fady dia mahatonga ny razana hitahy ny velona. Inoana fa miteraka fahavoazana ny fanadinoana ny razana na ny tsy firaharahana ny hafatra navelany. Ny famonoana omby atao sorona no fomba anehoana ny fanajana ny razana na ampitsaharana ny fahatezeran' izy ireo.
Azo atao koa ny maneho fanajana ny razana amin' ny alalan' ny fanidinana toaka avy amin' ny tavoahangy vao nosokafana mba hanomezana ny anjarany, eo amin' ny zoro avaratra-atsinanan' ny trano (zoro firarazana) no anaovana izany.
"Les Croyances à Madagascar" Madasite.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fivavahana_amin%27_ny_razana&oldid=1038056"
Voaova farany tamin'ny 26 Septambra 2021 amin'ny 06:01 ity pejy ity.